The Voice Of Somaliland: Puntland oo ku jirta siddii ay Garoowe u difaaci lahaayeen
Puntland oo ku jirta siddii ay Garoowe u difaaci lahaayeen
(Waridaad) - Ka dib markii ay ciidamadda Soomaliland la weergtay gacan ku hayntii laascaanood, ayaa waxaa la soo wariynayaa in uu hadda khalkhal weyni soo wajahay maamulkii majeerteniya.
Wararka iska soo daba dhacaya ayaa tibaaxaya, in Cadde Muuse oo ku sugnaa magaaladda Addis-Abba uu si deg-deg ku soo gaadhay magaala -madaxda maamul goboleedka majeerteeniya, iyaddoo laga cabsi qabo inay ciidamadda Soomaliland u soo ruqaansadaan dhinaca Garoowe.
Waxaa hadda shir albaabaddu u xidhan yahay ku jiray masuuliyeentii Puntland oo loo kala hadhin, iyagoo ka arrin sanaya siddii ay u difaaci lahaayeen Garoowe.
Ninba ceesaantii ceel keen...ayuu hadal taagan yahay iminka.
Halkan kala socoda wixii warar ah ee na soo gaadha.